June 2, 2018 – Rohingya Language Foundation
မောင်တောစာစစ်ဌာနမှ ၅-ဘာသာဂုဏ်ထူးဖြင့်????? ထူးချွန်စွာအောင်မြင်သော ချစ်တူမလေး မရူချီမြင့်အား ဤကဗျာဖြင့် ဂုဏ်ပြုလိုက်၏။ ???????????? ???????????????? ရှားပါးသည့် အောင်မြင်မှု ☝☝☝☝☝☝☝☝ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးမိုးမစဲတမ်း ကမ်းမမြင်လောက်အောင် ဖြစ်နေပေမယ့်လည်း ရေပြင်ကြီးကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပြီ၊၊ အာကာပြင်ကတိမ်ဖုံးလမင်းလို လမ်းမမြင်လောက်အောင် မှောင်နေပေမယ့်လည်း အမှောင်ထုမှ ဖောက်ထွင်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ ခရီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံး ဆူးခလုတ်တွေ ခင်းကျင်းထားပေမယ့်လည်း ဆူးနင်းရင်း ပန်းကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီ။ လွတ်လပ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေကြား လက်ထိတ်တွေ ခတ်ထားပေမယ့်လည်း ရှားပါးသည့် အောင်မြင်မှုကိုဆွတ်ခူးနိုင်ခဲ့ပြီ။ ရှုပ်ထွေးတဲ့ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို မင်ကုန်ဆဲဆဲကလောင်လေးနဲ့ အပြီးတိုင် အခမ်းနားဆုံးချေမှုန်းနိုင်ခဲ့ပြီ။ #အာရကန်မြေဖွားလူငယ်တစ်ဦး (M Farooq) Congratulations again. ???? I’m very proud of you. ????